Allied Health Professions > Radiology & Medical Imaging
Qalabka raajada ultrasoundka ayaa ku shaqeeyo hirar codeed oo aad u sareeya si loogu baaro xubnaha jirkaaga gudahiisa.
Waxaa ay la mid tahay qalabka u ogolaada maraakiibta in ay eegaan bada hoosteeda.
Baaritaanka ma laha xanuun.
Ka dib markii la isticmaalay 25 sano, ultrasoundka ayaa la ogaaday in uu geysan wax dhibaaato ah dadka waaweyn iyo caruurta aan weli dhalan.
Si loo baaro xubnaha caloosha (KILYAHA, BEERKA, BEERA YARAHA IYO XAMEETADA), waxaa muhiim ah in calooshaada ay ka marnaato hawo ama aaryo. Taasi waxay cawineeysaa baaritaanka.
1. Ha calaanjin xanjo labo maalin ka hor inta aan baarida lagugu sameyn.
2. Ha cabin wax aashito leh sida kooka kolada labo maalin baarida ka hor.
3. Sigaar ha cabin maalinta baarida.
4. Waxba ha cunin hana cabin inta aan ka aheyn, biyo, qaxwo madow, ama shaah(oon sokor ama caano laheyn) laba iyo toban saac inta baarida ka horeysa.
wax su’aalo ah haday jiraan halkaan ku waydii.
Aaad iyo aad baad u salamantihiin Dhamaantiin meelkastoo aad joogtaan.
Tan kale waxaan jeclaa in aan idin weydiyo Qalabka Raajada Ultrasound su,aal ku saabsan Ilmaha Uurka ku jira inta uu san dhalan.See Lagu Ogaan Karaa In Ilmahasi yahay Lab iyo Dhedig?Su,aal oo aan aad u jeclaa in aan helo Answer keeda. sida ugu dhaqsaha badan.
salaaaam dhamaaan akhyaarta halkan soo gasha,
maxamed hadaan isku dayo inaan suaashaa ka jawaaabo,it's simple
it is possible to determine the sex of the fetus as early as 14 weeks of gestational age, but it is frequently difficult to make a difinitive diagnosis until several weeks later....it all depends upon the fetus having its legs a part.....mar marka qaar ilmihii luguhiiisa ayaad eegaysaa bal waxa ka hooseeya, mise lugihiiba qam isku siistay....if that happens we usually wait until the baby moves its legs....also determining fetal sex depends on recognizing the characteristic of the male and female....if it's a boy, you'll see male genitalia(waadix zayi shams)....the female labia are smaller in size than scrotum and have an appearance similar to two lips.....that is how you can tell the difference......ultrasound technology aaad ayay uhorumartay.....
badanaa marka dumarka uurka leh baadhayno waan tusnaaa ilmihiii oo dhaqdhaqaaaqaya,lugaha, gamcaha, caloosha,faraha, wajiga.....sometimes you can see the hair, not often though...heart beatka dhagaysiinaa...120-160bpm is consider normal....you can also findout genetic disorders such as downsydrome......waxa kaloo ogaan kartaa ilmihu haduu faruuran yahay caadi ayaad u arki kartaa...marka wakhtigada dhalmada soo dhawaado, ultrasoundka ayaa lagu eega in madaxa ilmaha uu hoos udagay....anyway, waxyaaba badan ayaa la eega, not only the sex of the baby
i hope that answers your question....qofkii wax igu dhaama waa so qori kartaa
salaaaama and enjoy ramadaaan
Salamulaahi Dhamaan Bahweynta isticmaasha Somalidoc.com meelkasta ay adduunka ka kala jogaan aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay waxqabadkooda wana uga mahadcelinaya dhamantood meelkasta aya kala joogaa.
Dhanka kale waxaan jeclaan lahaa in aan wax badan ka ogaado Ultrasound ka.
Fadlan haddi ay jiraan dad aad wax yaqaan hayga soo cawiyaan hana iga jaahil bixiyaan waxii laygu dhaamo ,sida ilamaha lab iyo dhedig kuu yahay intuu ku jiro caloolsha hooyadii.